बैंकमाथि पुँजीको भार गह्रौं हुन थाल्यो | गृहपृष्ठ
Home १० वर्ष अघि बैंकमाथि पुँजीको भार गह्रौं हुन थाल्यो
on: १ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०६:३६ १० वर्ष अघि
बैंकमाथि पुँजीको भार गह्रौं हुन थाल्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी बढाउन बाध्य भएका बैंकहरू पुँजीको भारमा थिचिन थालेका छन् । फलस्वरुप आफ्नो खुद नाफा बढाउन सफल बैंकहरुलाई पनि विगतमा जस्तो उच्च दरमा लाभांश दिन मुस्किल पर्न थालेको छ ।
स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको खुद नाफामा आव २०६३/६४ मा अघिल्लो वर्षभन्दा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । यसले गर्दा कम्पनीले यस वर्ष बोनस सेयर र नगद गरी कुल लाभांश १३० प्रतिशत दिने भएको छ । गत वर्ष यस्तो लाभांश १४० प्रतिशत थियो । तैपनि कम्पनीका सेयरको बजार मूल्य उच्च भएकाले सेयरहोल्डरले पाउने कुल मूल्य भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी हुनेछ ।
बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने अघिल्लो वर्षको रु. ४६८ बाट बढेर रु. ५१२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको पुँजी ३७ करोड ४६ लाख ४० हजार रहेकामा गत वर्ष यसलाई बढाएर ४१ करोड ३२ लाख ५४ हजार ८ सय पुर्‍याइएको थियो ।
यस वर्ष बैंकले बोनस सेयरका रुपमा थप सेयर जारी गर्ने भएकाले अर्को वर्ष लाभांश दर झन् घट्ने सम्भावना बढेको छ ।
करिब यस्तै समस्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नेपाल इन्डस्ट्रियल एक कमर्सियल (एनआइसी) बैंकमा पनि देखापरेको छ । इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खुद मुनाफामा ४६ प्रतिशत वृद्धि भए पनि बैंकले नगद लाभांश ५ प्रतिशत मात्रै दिने भएको छ भने एआआईसीको ७३ प्रतिशत खुद नाफा वृद्धि भए पनि उसले नगद लाभांश दिन नसक्ने भएको छ ।
वर्ष ३, अंक ७, २०६४ असोज २१–२७ मा